Medical Writings ဆေးပညာစာများ: Q and A December 2012 (4)
Q and A December 2012 (4)
1. ကျွန်တော် အသက် 22 ပါ။
2. ကျွန်တော်၏ဇနီးသည် အိမ်ထောင်ကျပြီး အချိန်မှ ယခု အချိန်အထိ
3. ကျွန်တော့် အသက်ကတော့ 27 နှစ်ပါ။
4. ကျွန်တော်က (့) ပါ။
5. ကျွန်မ၏သား မောင် (့)၊ (ကျား)၊ အသက် (၁၇) နှစ်သည်
6. သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးခိုင်းလို့ပါ။
7. ကျွန်မက အရမ်းပိန်လို့ပါ။
8. သမီးအစ်မက မျက်ရိုးတွေ တအားကိုက်နေလို့ဆိုပြီး မျက်စိဆရာဝန် သွားပြတာ
9. ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး အကြောင်းလေးပြောပြပြီးမေးချင်လို့ပါ။
10. မေမေ့ x-ray အဖြေနဲ့ CT Scan အဖြေကို ကျေးဇူးပြုပြီးစစ်ပေးပါအုံးရှင့်။
11. I’m the one who discussed about my throat swollen last month.
14. (့) ဆေးရုံကြီးက ရပါတယ်။
15. ကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်ခြေထေက် ဒူးဆစ်အပေါ်နားမှာ
Sun, Dec 30, 2012 at 7:33 PM
ကျွန်တော် အသက် 22 ပါ။ လေအောင်တဲ့ ရောဂါခံစားနေရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ညဘက် အိပ်တောင် မအိပ်နိုင်ပါ။
၁။ လေအောင့်ရောဂါ ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းအရင်း (အစားအစားအပါအဝင်)
၂။ မဖြစ်အောင်ကွာကွယ်နည်း (မည်သို့ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမည်နည်း။) ကို သိလိုပါသည်။
Sun, Dec 30, 2012 at 6:54 PM
ကျွန်တော်၏ဇနီးသည် အိမ်ထောင်ကျပြီး အချိန်မှ ယခုအချိန်အထိ ရေထိလျှင် ချမ်းတတ်သည့် ရောဂါရနေပါသည်။ ဆေးနည်းရှိလျှင် ပြောပေးပါဆခင်ဗျာ။
ဖြစ်တဲ့သူရဲ့ အသက်၊ ဖြစ်နေတာ ဘယ်လောက်ကြာ၊ နေထိုင်ရတဲ့ဒေသ ရာသီဥတု၊ ရေနွေးနဲ့ကောဖြစ်ပါသလား။ တခြား ကျန်းမာရေး ထူးခြားချက်ရှိပါသလား။
Sat, Dec 29, 2012 at 4:39 PM
ကျွန်တော့် အသက်ကတော့ 27 နှစ်ပါ။ 7နှစ်အရွယ်လောက်က ထိတ်လန့် ခြောက်ခြားဖွယ်ဘေးဆိုးကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အသက်မသေခဲ့ပါ။ အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းချက်မရှိခဲ့ပေမဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းမြန်လာပါတယ်။ သာမန်အချိန်မှာမသိနိုင်ပေမဲ့ ကြောက်စိတ်ဝင်တာနဲ့ ရင်တွေတအားခုန်တော့တာ ဒါတွေဟာ ကျွန်တော် အသက်ငယ်သေးလို့ ခံစားရတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ အခုချိန်ထိခံစားနေရပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကို ထိန်းပေမဲ့ ဘယ်လိုမှထိန်းလို့မရ ဖြစ်နေပါတယ်။ နှလုံးစက်နဲ့ရိုက်တော့လည်း ထူးထူးခြားခြား ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့။ နှလုံးအားဆေး ပရိုကတ် သောက်ခိုင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှလုံးခုန်တဲ့ရောဂါကတော့ ခံစားနေရတုန်းပါ။ ခုဆိုရင် ကျွန်တော်ခံစားနေရတာ နှစ် 20 လောက်ရှိပါပြီ။ ဒါကြောင့် လမ်းညွှန်ချက်နှင့် သောက်သုံးရမည့်ဆေး ရှောင်ရှားရမည့်အစားစာများကို ညွှန်ပြစေလိုပါသည်။
ဆရာဝန်က ဘာပြောပါသလဲ။ နှလုံးခုန်နှုန်း တမိနစ်မှာ ဘယ်လောက်ရှိတတ်ပါသလဲ။ လက်ကောက်ဝတ်နေရာ လက်မ အခြေမယ် ကိုယ့်ဖါသာစမ်းနိုင်ပါတယ်။ စိတ်အေးလက်သာထားပြီး စမ်းပါ။ ကြောက်စိတ်အတွက်ကော ဆရာဝန် ပြဘူးပါသလား။ ဘာဆေးတွေသောက်နေပါသလဲ။ ညအိပ်လို့ ပုံမှန်ဘဲထား။
ကျွန်တော်ခံစားနေရောဂါ လို့ထင်တဲ့အချိန်ကသွားပြတာပါ။6လ လောက်တော့ရှိသွားပါပြီ။ သွားပြတော့ နှလုံးစက် ထွက်တဲ နှလုံးခုန်နှုန်းကြည့်ပြီး သိပ်ပြီးမထူးခြားဘူးလို့ပြောပြီး နှလု့းအားဆေးပရိုကတ်သောက်လို့ပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း တစ်လလောက်တစ်နေ့ တစ်လုံး ပုံမှန်သောက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာပေါ်လာရင်ရင်တွေ တဒိတ်ဒိတ်ခုန်ပြီ စကားပြောရင် အသံတွေလည်းတုန်နေတယ်။ ကြောက်စိတ်ဝင်တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ခုထိဖြစ်နေတုန်းပါ။ ခုတော့ဘာဆေးမှ မသောက်တော့ပါ။ ဒါကြောင့် ညွှန်ကြားချက်ပေးစေလိုပါသည်။ ညဆိုရင် ဘားမှ မစဉ်းစာရင် ပုံမှန်အိပ်ပျော်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မစဉ်းစားဖြစ်အောင် အိပ်ရာဝင်ရင်သီချင်းနာထောင် စာအုပ်ဖတ် ရေဒီယိုနားထောင်၊ တစ်ခုခုကိုလုပ်ပြီး အိပ်ချင်တော့မှ အိပ်လိုက်တာပါ။ အိပ်ယာဝင်ပြီး အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို စဉ်းစားလိုက်ရင် မနက် ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီထိ အိပ်မပျော်ပါ။ ကျွန်တော် ခံစားရတာက သာမန်အချိန်မှာ ဘာမှမထူးခြားပါ။ ပြဿနာတစ်ခုခုကို ရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည်မရှိဘူးလို့ ပြောရမှာပါ။ ဒါကြောင့် သောက်သုံးရမည့်ဆေး လိုက်နာရမည့် ကျန်းမာရးဆောင်ရွက်ချက် ရှောင်ရှားရမည့် အစားအသောက်များကို ညွှန်ပြစေလိုပါသည်။
ပဌမဥပဒေသ။ လူတောထဲမှာ တတ်နိုင်သမျှနေထိုင်ပါ။ ရောနှောပါ။ ဘာလုပ်လုပ် သက်တောင့်သက်သာ လုပ်တဲ့အကျင့် မွေးမြူပါ။
ဒုတိယဥပဒေသ။ ဖြစ်နတဲ့ ကြောက်စိတ်ကိုဖျောက်ဘို့ အချိန်ယူနိုင်တာကို သိထားပါ။
တတိယဥပဒေသ။ ကိုယ်စိုးရိမ်နေခဲ့တာ၊ မရွံ့မရဲဖြစ်နေခဲ့တာမှန်သမျှဟာ တကယယ်တန်းကျော်လွားပြီးသွားချိန်ကျရင် ဘာမှ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်စရာတွေ မဟုတ်ပါလားလို့သိလာတာကို သဘောပေါက်ပါ။
စတုတ္ထဥပဒေသ။ ကိုယ်အဲလိုကြိုးစားလို့ တိုးတက်မှုကို အကဲဖြတ်ရာမှာ ငါဘာလုပ်နိုင်ခဲ့တပြီဆိုတာကိုသာ မှတ်ယူပါ။ ငါဘယ်လိုခံစားခဲ့ရသလဲဆိုတာကို ထည့်မစဉ်းစားပါနဲ့။
ပဉ္စမဥပဒေသ။ တခုခုကိုကျော်လွှားတော့်မယ်ကြံရင် ကိုယ်ဖတ်ဘူး၊ ကြည့်ဘူးတဲ့ (ဆူပါမင်း) ကို သတိရလိုက်ပါ။
အားဆေးဆိုတာ Vitamin B Complex ဗီတာမင် (ဘီ) အုပ်စု၊ ဒါမှမဟုတ် Neurobion သောက်ပါ။
တခါတလေ တခုခုကိုရင်ဆိုင်စရာရှိချိန်မှာ Propranolol 25 mg သောက်ပါ။
Fri, Dec 28, 2012 at 5:28 PM
ကျွန်တော်က (့) ပါ။ အသက်က၂ဝ ရှိပါပြီ။ ရန်ကုန်မြို့မှာ နှာခေါင်းခွဲစိတ်တာတို့၊ အရေးပြားပြုပြင်တာတို့ လုပ်လို့ရမယ့်ဆေးရုံများ ရှိပါသလား။ ကျွန်တော်နှာခေါင်းလေးစောင်းနေလို့ ပြုပြင်လို့ရမလား။ နိုင်ငံခြား (ထိုင်း) သွားပြီး နှာခေါင်းခွဲစိတ်ဖို့လဲ ငွေကြေးမတတ်နိုင်လို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အဲလိုခွဲစိတ်လို့ရမယ့်နေရာများရှိပါသလား။ ရှိရင်လဲ ငွေကြေး ဘယ်လောက်များကုန်ကျမည်သည်ကို သိရှိလို့ရမလား။ နောက်ပြီး ကျန်းမာရေးကိုလဲ ဆိုးကျိုးဖြစ်နိုင်ပါသလား။
ဆောရီး။ ဆရာက မြန်မာပြည်ထဲ နေရတာမဟုတ်လို့ မသိပါ။ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။ ပလပ်စတစ်-ဆာဂျရီဌာနက အထူးကုဆရာဝန်က လုပ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ပလပ်စတစ်-ဆာဂျရီဌာနက အထူးကုဆရာဝန်က ဘယ်လိုရှာရပါသလဲ။
English လို ပလပ်စတစ်-ဆာဂျရီဌာန ကို ပေါင်းပေးပါခင်ဗျာ။
ရှာတောတော့ ဆရာအကူအညီမပေးတတ်ပါ။ လက်ပန်းတောင်းအရေးအခင်းက ဒဏ်ရာရလို့ ရန်ကုန်ကိုလာဆေးကုနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတချို့ ကုသမှုခံနေယူနေတဲ့ဆေးရုံး-ဌာနမှာ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ရေဒီယိုကနေကြားရတာ ဒီလိုနေရာကုသတာလဲ ပါမယ်ထင်တယ်။
Sat, Dec 29, 2012 at 9:46 AM
ကျွန်မ၏သား မောင် (့)၊ (ကျား)၊ အသက် (၁၇) နှစ်သည် ပြည်တွင်း အထူးကုသမားတော် တစ်ယောက်မှ အောက်ပါ ရောဂါရာဇဝင်အရ ထိုင်းနိင်ငံသို့သွားရောက်ပြီး Endocronologist နှင့်ပြသရန်ညွှန်ကြားပါသည်။
Clinical History: Defective Vision since 5/2011, Impaired memory, Increased growth, History of high glucose, Fatty liver, Dyslipidaemia, Hyperuricaemia, Subclinical Hypothyroid, Social isolation, History of polypectomy (Juvenile adenomatous polyp) on 26/3/12 ထိုင်းနိင်ငံမသွားမီ သွေးအဖြေတွေပါ။
T.S.H (31.1.2012) - 26.770 ulu/ml \_ T3, T4 (3.69pg/nl, 1.12mg/dl)
T.S.H (20.9.2012 ) – 12.86 ulu/ml \_ T3, T4 (3.30pg/nl, 1.10mg/dl)
Testosterone (14.6.12)-0.998 mg/ml
Agent ၏ စီစဉ်မှုဖြင်.ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆရာပြရာ MRI ရိုက်ပါသည်။ (normal pituitary)
ထိုဆရာမှ မျက်စိဆက်ပြခိုင်းပါသည်။ (normal) - Endocronologist မှနှလုံးဆရာဝန်ပြခိုင်းသဖြင့် ၂၄ နာရီ EKG စက်တပ်ရပါသည်။ နှလုံး၏ function ကောင်းသော်လည်း နှလုံးခုန်နှုံးမြန်နေပြီး အချို့အချိန်များတွင် HR-154 ထိရှိပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှ သွေးအဖြေများ
T.S.H (3.11.2012) -10.715 ulu/ml
T3,T4(3.11.2012)- 4.01 pg/ml,0.83ng/dl
Bumrungrad ဆေးရုံမှ Endocronologist မှ Subclinical Hypothyroidism ဟု သတ်မှတ်ပြီး Euthyrox 50 ug (Levothyroxine sodium) တစ်နေ့တစ်လုံး သောက်စေပါသည်။
6.11.12 မှစ၍ နံနက် ၅ နာရီတွင် အစာမစားမီနေ့စဉ် သောက်ပါသည်။ ဆေးသောက်စဉ်အတွင်း မျက်စိဝါး၊ နှလုံးခုန်မြန်၊
အရိုးများနာ၊ လှေကားထစ်မတက်နိင်၊ ကိုယ်ပူ(မဖျားပါ)လာ၍ အယားဖုထပါသည်။ ဘန်ကောက်ကို လှမ်းမေးသောအခါ ပြည်တွင်းဆရာဝန်နဲ့ပြရန်ညွှန်ကြားပါသည်။ ပြည်တွင်းပြနေကြအထူးကုနှင်ပြသောအခါ သွေးပြန်စစ်ခိုင်းပါသည်။
T.S.H- 6.94 ulu/ml (ကျသွား)
Calcium in blood-6.1mg/dl (low)
Calcium နည်းသည်ဆို၍ Calcivita Forte တစ်နေ့တစ်လုံးသောက်ရပါသည်။ ယခုလက်ရှိတွင်တကိုယ်လုံးပူရ်ျ ပုံပါအတိုင်းအယားဖုများထပါသည်။ အပူလုံးဝမခံနိင်ပါ။ ခေါင်းကိုက်လာလျှင်မျက်စိဝါးပါသည်။ အာရုံမစူးစိုက်နိင်ပါ။လည်ဂုတ်နှင့်လည်ပင်းတွင် မည်းလာပါသည်။ အယားဖုထသည်မှာ အန္တရာယ်ရှိပါသလား။ လက်ရှိသောက်သုံးနေသော Calcivita နှင့် Euthyrox ကိုဆက်သောက်သင့်ပါသလား။ ဘယ်လိုကုသသင့်ပါသလဲ။
အယားဖုတွေက ချွေးထွက်တိုင်းထပြီး နှစ်နာရီလောက်ကြာမှ ပျောက်ပါတယ်။ အယားဖုတွေကဆိုးပြီး ALERDAY 120 သောက်လည်း မပျောက်ပါ။ ဆရာ၏ Thyroid အကြောင်းရေးသော စာများကိုလည်း ဖတ်ပြီးပါပြီ။ လိုအပ်သည်များ ညွှန်ကြားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် စာရေးလိုက်ရပါသည်။
ဆောရီးဗျာ။ ရောဂါက ရှုတ်ထွေးတယ်။
Already 120 က Cetrizine ဖြစ်လို့ (အလာဂျီ) အတွက်းပေးရတာ မှန်ပါတယ်။ ခံစားရတာကိုသက်သာစေပါမယ်။
သိထားဘို့က (အလာဂျီ) က ဘာလို့ရနေတာလဲ။ ရစေတာနဲ့ ထပ်တွေ့ရင် ထပ်ဖြစ်နေမယ်။ ဆေးက ဖြစ်စေတာကို မပျောက်ပါ။
သောက်နေရတဲ့ဆေးကနေလဲ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်-ရာသီဥတုကလဲဖြစ်စေနိုင်သလို၊ အစားအသောက်၊ အသုံးအဆောင်တွေ နဲ့ အနံ့ကနေလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုပေးတဲ့ (အင်တီဟစ်စတမင်း) ဆေးနဲ့ မရသေးရင် (ကော်တီဇုန်း) ဆေး ထပ်ပေးတတ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ လူနာမှာ တခြားစဉ်းစားစရာတွေလဲရှိတာမို့ ကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်က ညွှန်မှသာ သောက်သင့်တယ်။ Calamine lotion ဆေးလိမ်းတာလဲ အထောက်အကူရပါမယ်။ ဆေးကုတာကိုတော့ အထူးကုဆရာဝန်နဲ့ ဆက်ကုနေရမယ်။ သက်သာတိုးတက်လာမှာပါ။
Fri, Dec 28, 2012 at 2:48 PM
သမီးသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က မေးခိုင်းလို့ပါ။သူက တစ်နေ့ကို လေ့ကျင့်ခန်း 45 မိနစ်လောက်လုပ်ပါတယ်တဲ့။ အိပ်ထမတင်၊ ခါးလှဲ့၊ ပေါင်လွှဲ၊ အေရိုးဗစ် စတာတွေလုပ်တာပါ။ သူကနေ့တိုင်းလုပ်သင့်ပါသလားတဲ့။ ရာသီလာတဲ့ရက်တွေနဲ့၊ ညောင်းကိုက်နေတဲ့နေ့တွေမှာရော လုပ်သင့်ပါသလားတဲ့။ အသက်က 34 ပါ။ အိမ်ထောင်မရှိပါဘူး။ ဘာရောဂါမှလဲ မရှိဘူး ဆရာ။
ကျန်းမာရေးအကြံပေးစာတွေမှာ တပါတ်ကို ၅ ရက်၊ တနေ့မှာ မိနစ် ၃ဝ လုပ်ခိုင်းကြတာများတယ်။
Wed, Dec 26, 2012 at 4:59 PM
ကျွန်မက အရမ်းပိန်လို့ပါ။ အရပ်က5ပေ 1 လက်မပါ ပေါင်ချိန် 88-89 ပဲရှိပါတယ်။ အသက်က 26 နှစ်ပါ။ အိမ်ထောင်လည်းရှိပါတယ်။ အမျိုးသားနဲ့က တစ်နယ်စီပါ။ marvelon28 သောက်ပါတယ်။ ကလေးတော့လုံးဝမယူရသေးပါဘူး။ အိမ်ထောင်ကျတာ 1 နှစ်နီးပါးတော့ရှိပါပြီ။ အဲဒါနဲ့လည်းဆိုင်မလားလို့ပါ။ ကျွန်မက နဂိုကလည်း ပိန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုပိုပိန်သွားလို့ပါ။ ကျွန်မ အလုပ်က အထိုင်လည်းများပါတယ် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု သိပ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး။ အဲဒါ ဘာဆေးသောက်သင့်လဲ ဘာတွေလုပ်သင့်လဲသိချင်ပါတယ်ဆရာ။
Wed, Dec 26, 2012 at 12:58 PM
သမီးအစ်မက မျက်ရိုးတွေ တအားကိုက်နေလို့ဆိုပြီး မျက်စိဆရာဝန် သွားပြတာ နှစ်ဖက်လုံးမှာ ရေတိမ်ရှိနေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ diamox 0.25 g ကိုတစ်နေ့ နှစ်ကြိမ်သောက်ခိုင်းပါတယ်။aristomol မျက်စဉ်းလဲ နှစ်ကြိမ် ခတ်ခိုင်းပါတယ်။ အဲဒါ ဆရာဝန်က မှာလိုက်တယ်တဲ့။ဆေးသောက်ပြီးရင် ခြေထောက်တွေ ထုံနေလိမ့်မယ်လို့ မှာလိုက်တယ်တဲ့။ အခု ထုံလဲထုံနေတယ်တဲ့ဆရာ။ စိုးရိမ်ရပါသလား ဆရာ။ ရေတိမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရေးထးတာရှိရင် Attach တွဲပေးပါဦးဆရာ။ သူက မျက်မှန် တပ်ရတယ်။ အဝေးမှုန်ပါ။ အသက်က 35 နှစ်ပါ။အပျိုပါဆရာ။ မျက်မှန်တပ်တာက 10 နှစ်လောက်ရှိပြီ။မျက်စိ ဆရာဝန်နဲ့က2နှစ် တစ်ကြိမ်လောက်တော့ ပြဖြစ်ပါတယ်ဆရာ။
Glaucoma မျက်စိ ရေတိမ်
Tue, Dec 25, 2012 at 11:40 PM
ကျွန်တော့် အမျိုးသမီး အကြောင်းလေးပြောပြပြီးမေးချင်လို့ပါ။ အသက်က ၃ဝ ပါ။ ချောင်းဆိုးတာ ၃လလောက်ရှိပြီ။ ဒါပေမယ့် နေ့ဘက်ဆိုးတာမဟုတ်ဘဲ ညအိပ်မှ ဘဲဆိုးတာ ဆေးခန်းလည်းပြတာစုံနေပြီ မသက်သာဘူးဖြစ်နေတယ်။
ဓါတ်မှန်ရိုက်သလား၊ (တီဘီ) ရှိသူနဲ့ နီးစပ်သလား။ သလိပ်ထွက်သလား၊ သွေးပါဘူးသလား။ ဘယ်လိုဆေးမျိုးတွေ သုံးနေပါသလဲ။
ချောင်းဆိုးတာက ပိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ပိုးမဟုတ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့်လဲဖြစ်သေးတယ်။ ရင်ကျပ်လို့ဆိုးတာလဲရှိတယ်။ ပန်းနာပေါ့။ ကပျပ်နေတဲ့အချိန်မှာ အသက်ရှူလိုက်-ထုတ်လိုက်ရင် စီစီ စီစီသံ ကြားရနိုင်တယ်။
ပိုးထဲမှာ အများအားဖြင့် ဗိုင်းရပ်စ်။ ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသေစတေဲ့ဆေးမရှိလို့ ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေး စတာကိုသုံးရတယ်။ ချောင်ဆိုးပျောက်ဆေးဆိုတာ ချောင်းခြောက်အတွက်၊ သလိပ်ထွက်ဘို့၊ ရင်ကျပ်သက်သာဘို့ ဆိုပြီး ၃ မျိုးရှိတယ်။ နောက်ပြီး အိပ်ချင်စေတဲ့ဆေးပါရောထားတာနဲ့ မရောတာရှိတယ်။ ချောင်းအကြာကြီးဆိုးသူတွေက အပြင်းစားလို့ခေါ်တဲ့ အိပ်ချင်စေတာပါတဲ့ချောင်းဆိုးပျောက်ဆေးသုံးနိုင်တယ်။ ကြာကြာသောက်ရင် စွဲတတ်တာသတိထားရတယ်။ ဥပမာ (ဖင်စီဒိုင်းလ်) ဆေးရည်။
(ဗိုင်းရပ်စ်) မဟုတ်ရင် (ဗက်တီးရီးယား)။ (တီဘီ) အပါအဝင်ပေါ့။ (တီဘီ) မဟုတ်ရင် အများသုံး ပဇီဝဆေးပေးရတယ်။ ပိုးအမျိုးမျိုးဖြစ်လို့ ဆေးရွေးသုံးရမယ်။ ဆေးပတ်လည်အောင်ပေးရမယ်ဆိုတာက ဒီလိုပိုးသေးဆေးအတွက်ပြောတာ ဖြစ်တယ်။
ညမှာဆိုးတာက အိပ်ယာမှာလှဲရင် ပိုဆိုးတာ နဲ့ ရာသီဥတုအေးတာ ၂ မျိုးစဉ်းစားနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ချောင်းဆိုးရတာ ကြာနေရင် သားအိမ်မကျအောင်ဂရုစိုက်သင့်တယ်။ ချောင်းဆိုးမယ်ဖြစ်လာတိုင်း သားအိမ် (ဝမ်းဗိုက်) ကို စိတ်နဲ့ထိန်းပါ။ လိုအပ်ရင် (ကီဂဲလ်) လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်စေပါ။
Fri, Dec 28, 2012 at 12:33 PM
မေမေ့ x-ray အဖြေနဲ့ CT Scan အဖြေကို ကျေးဇူးပြုပြီးစစ်ပေးပါအုံးရှင့်။ အထူးကုကတော့ x-ray အဖြေမကောင်းရင် CT ရိုက်မယ်ပြောပြီး x-ray ကိုကြည့်ပြီး CT ထပ်ရိုက်ခိုင်းတယ်။ CT ရိုက်ပြီးတော့မှ ဓာတ်မှန်ဆရာဝန်ကြီးက result ရေးပေးတယ်။ ပြီးတော့စိတ်ပူစရာမရှိဘူးဆိုပြီး ဆေး ၁ဝ ရက် သောက်ခိုင်းထားတယ်။ ဆေးသောက်ပြီးရင် ကောင်းသွားမယ်တဲ့ နှာခေါင်းထဲထည့်တဲ့ဆေးလဲ တစ်နေ့ ၃ကြိမ် ဒါမှမဟုတ် ၄ ကြိမ်ထည့်လဲရတယ်လို့ပြောတယ် ဆရာ။ မေမေကနှာခေါင်းမှာ အနာရှိပုံရတယ်ရှင့်။
ညာဘက် (မက်ဆယ်လရီ-ဆိုင်းနပ်စ်) မှာ ပြည်ရှိနေတယ်။ (ကယ်လ်စီဖီကေးရှင်း) ဖြစ်စဉ် ရှိနေတယ်။ ဒါတွေကြောင့် ထူ-ပိတ်နေတယ်။ ကျန်တာကောင်းတယ်။ စိုးရိမ်စရာရောဂါကြီး မဟုတ်ပါ။ (ဆိုင်းနပ်စ်) ရောဂါသက်သက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်ပေးတဲ့ဆေးနဲ့ သက်သာပါမယ်။ လိုရမယ်ရ ဆရာရေးထားတာ ပို့လိုက်ပါတယ်။
Mon, Dec 31, 2012 at 4:30 PM
I’m the one who discussed about my throat swollen last month. Today I went and saw doctor at (့) general hospital and checked endoscope again in my throat because my pain does not go away until now. Is not so serious but is heavy in the right neck and hard to breath. I took Neurobians as you suggested previously. But my pain does not go away. After endoscopy, doctor told me nothing special and like normal. But i explained doctor I can feelasmall node below right side of the jaw that isalittle bigger than left side. Doctor told me it is quite small and my feeling is not because of this. But I think is because of this but not sure. And one thing what I notice is that my right side of oropharynx wall is swollen and bouncing in front. And doctor also told me according to CT scan, my oropharynx wall is uneven. And I tried to press my right side of oropharynx wall and is painful all the way goes down to neck. And i took appointment to operate coming Thursday to remove small node because of my suspect. How to decide for my throat problem?
The doctor who examined you will give you the best advice and treatment. As you got appointment for surgery, I have no additional suggestion at this point of time. I am not sure if it is for biopsy or removal of the node(s).
He will remove the small nodes below the chin at right side of neck to be clear of my suspect. He will take biopsy form right side oropharynx wall and from nose nodes. And he told me my problem can be2things: 1) after biopsy, may be TB and 2) may be lymphoma. What is lymphoma? Is it cancer?
Lymphangiomas (လင်ဖန်ဂျီယိုးမား) လည်ပင်း အကျိတ် တမျိုး
Wed, Jan 2, 2013 at 5:25 PM
Mon, Jan 7, 2013 at 9:39 AM
သမီးကအရမ်းပိန်ပါတယ်ဆရာ။ သမီးအသက် ၂၄ နှစ်။ အိမ်ထောင်မရှိပါ ဆရာ။ အစားကတော့ အရမ်းတော့ မစားပေမယ့်မနည်းပါဘူး။ သမီးအရပ် ၅ပေ ၂လက်မ မှာ ပေါင် ၈၂ပေါင်ပဲရှိပါတယ်။ ဘာရောဂါမှမဖြစ်ဖူးပါဘူး။ သမီးဝလာအောင် သန္ဓေတားဆေးသောက်လို့ရပါသလား။ တားဆေးတွေသောက်ရင်ဝတယ်ဆိုလို့ပါ။ အားဆေးကတော့စုံနေပါပြီ။ ကောင်းကောင်းအိပ်စားသော်လည်းမဝလို့ပါဆရာ။
တားဆေးက တချို့မှာ ဝလာတယ်။ တချို့က မဝဘူး။ ဝလာသူက ပိုများတယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးပါ၊ အများသောာက်ကြတဲ့ တနေ့ ၁ လုံး၊ တလမှာ ၂၈ လုံးပါတာကို ပြောတာဖြစ်တယ်။
Wed, Jan 9, 2013 at 4:29 PM
(့) ဆေးရုံကြီးက ရပါတယ်။ ထိုင်းနဲ့ ကိုရီးယားက ဆရာဝန်တွေလာပြုပြင်ပေးတယ်လို့ပြောပါတယ်။ အနည်းဆုံး ၁ဝ သိန်းက စတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တိုင်ပင်ခက ၄၅ဝဝဝ ပေးရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကြောက်တာက ခွဲစိတ်ပြီးသွားရင် တခုခုဖြစ်မှာတို့ ပြန်ပြင်လို့မရတော့တဲ့အရာတွေပေါ့၊ ခွဲစိတ်ပြီးသွားလို့ ၂၄ နာရီပြည့်သွားရင် ပုံမှန်အတိုင်းအပြင်သွား၊ လှုပ်ရှားသွားလို့ မရသေးဘူးပေါ့၊ အဲ့လို့ခွဲစိတ်တာလဲ အိမ်ကိုမသိစေချင်လို့ပါ။ ခွဲစိတ်ပြီးလို့ ညကျလို့ချင်ရင် အိပ်တာကအစ သတိထားရဖို့လိုလား ခင်ဗျာ။ ဆရာပြောထားတဲ့ထဲမှာတော့ မေးရိုးပါလိုအပ်ရင် ပြင်ရမယ်လို့ပြောတယ်။ တစ်ခါတည်းနဲ့ပြီးသွားရင် ကောင်းမယ်။
ဒီလိုခွဲစိတ်တာမျိုးဟာ အချိန်ယူရတယ်။ ခွဲပြီးနေရထိုင်ရတာလဲ အရေးကြီးပါတယ်။ (မေဂျာ-အော်ပရေးရှင်း) ဖြစ်တယ်။
Wed, Jan 9, 2013 at 6:45 PM
ကျွန်တော့် ဘယ်ဘက်ခြေထေက် ဒူးဆစ်အပေါ်နားမှာ အကြောတွန့်လိန်ဖောင်းတက်နေပါတယ်။ တော်တော်ကြာနေပါပြီ။ အရင်တုန်းကတော့ ဘာမှမနာဘူး။ အခုတလော အလုပ်များတော့ တခါတရံ ကျင်တယ်။ နဲနဲနာပြီး အကြောလည်း ပိုတွန့်တက်လာတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လို ဆေးဝါးမျိုးတွေ သုံးစွဲ လုပ်ကိုင်သင့်သလဲ။ Varicose veins သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်း
Varicose Veins and Spider Veins သွေးပြန်ကြောထုံးခြင်းများ